वाइन ग्लास कसरी समाउने ? - LiveMandu
वाइन ग्लास कसरी समाउने ?
सामान्यतया अन्तरािष्ट्रय र कुटनैतिक तवरमा खानपान र सभ्यताका लागि एउटा सामान्य टेबल नियमहरु बनाइएको पाइन्छ । यी कुराहरु कुटनितिका लागि अति महत्वपूर्ण रहने हुन्छ र अन्तराष्ट्रिय फोरममा यि कुराहरुको विशेष महत्व हुन्छ । बिशेषत कुनै देश या क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिँदा यी नियमहरु सभ्यता र सहजताका प्रतिक हुने गर्दछन् ।
वाइन ग्लास समाँउदा ग्लासको तल्लो भागको मसिनो डन्ठीमा समाउने गर्नुपर्दछ । रातो, सेतो वा अन्य कुनै पनि प्रकारका वाइनहरु खाँदा माथि समाइयो भनें हातको तापक्रमले वाइनको स्वादमा सम्म असर पर्ने संभावना रहने हुन्छ तसर्थ वाइन राखिएको माथिल्लो सोली नछोइकन खाने गर्नुपर्दछ ।
हुन त आफूलाई सहज लाग्ने तवरले पिँउदा केहि फरक नपर्न पनि सक्दछ यद्धपि देशको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा या सभ्यताको मापदण्डमा सामान्य नियम मान्दा खासै फरक पर्दैन ।
यसरी वाइन या अन्य ड्रिकंसहरु सेवन गर्दा टोस्ट गरिने चलन हुन्छ, यसरी टोस्ट गर्दा होस्टले पाहुनाको भन्दा आफ्नो ग्लास तल राख्ने र पाहुनाले नखाउन्जेल आफूले खान नहुने नियम रहन्छ । सामान्यतया कुनै कुरा या योजनाको सफलताका लागि यसी टोस्ट गरिने चलन हुन्छ ।
सुशीला पौडेलको 'तृषा'
आज बर्षकै सर्वाधिक जाडो
शाहरुख खानले चलचित्रमा गरेका केही प्रयोगहरु